स्वास्थ्य Archives - Janasamsad
झाडापखालाको उच्च जोखिममा बालबालिका, यसरी सकिन्छ बचाउन
१० असार २०७९, शुक्रबार ०८:२६ मा प्रकाशित
गर्मी तथा वर्षा याम सुरु भएसँगै झाडापखाला, हैजाजस्ता रोगहरू फैलन सक्ने भन्दै सावधानी र सतर्कता अपनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ । बालबालिकाहरू यसको जोखिममा धेरै पर्ने गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या…
८ असार २०७९, बुधबार २१:३१ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । बिहीबारदेखि ५–११ वर्षसम्मका बालबालिकालाई कोभिडविरुद्धको खोप दिइने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार पहिलो चरणमा २७ वटा जिल्लामा असार ९ देखि १५ गतेसम्म पहिलो मात्रा दिइने छ । त्यसैगरी साउन २…
बालबालिकाका लागि अमेरिकाबाट आइपुग्यो खोप
५ असार २०७९, आईतवार २०:१५ मा प्रकाशित
झापा । ५ देखि ११ वर्षमुनिका बालबालिकाको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप आइतबार अमेरिकाबाट ल्याइएको छ । खोप कोभ्याक्स सुविधाअर्न्तगत निःशुल्क प्राप्त भएको हो । पहिलो लटमा आइपुगेको २२ लाख ३ हजार…
२ असार २०७९, बिहीबार २२:२५ मा प्रकाशित
झापा । नेपालमा पनि एक युवकलाई मंकीपक्स भाइरसको संक्रमण भएको आशंका गरिएको छ । मंकीपक्स भाइरस संक्रमणको आशंकामा एक युवकलाई टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालमा निगरानीमा राखिएको हो । दुवईबाट…
तौल घटाउँदा शरीर कुपोषण भएजस्तो होइन, झरिलो-भरिलो हुनुपर्छ
२९ जेष्ठ २०७९, आईतवार २२:३४ मा प्रकाशित
बजारमा मोटोपन घटाउने सूत्र बिक्री हुन्छ । ‘१५ दिनमा यति केजी तौल घटाउने’ भन्दै गरिने प्रचारमा मान्छे झुम्मिएका छन् । यसको स्पष्ट संकेत हो, मानिसहरु मोटोपनबाट हैरान छन् । मोटोपन…
२६ जेष्ठ २०७९, बिहीबार ०८:४४ मा प्रकाशित
स्वाद बढाउनुका साथै हरियो धनियाँ स्वास्थ्यका लागि पनि निकै फाइदाजनक हुन्छ । धेरै पोषक तत्वहरूले भरिपूर्ण हरियो धनियाँले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित धेरै समस्याहरू हटाउन मद्दत गर्दछ । हरियो धनियाँको सेवनले रगतमा…
२५ जेष्ठ २०७९, बुधबार २२:११ मा प्रकाशित
एजेन्सी । सामुद्रिक शास्त्रमा मनुष्यका हरेक अंगको बखान गरिएको छ जसलाई हेरेर तपाईं आफ्नो भविष्यका बारेमा जानकारी पाउन सक्नुुहुन्छ । हातको रेखाबाट भविष्य जानिन्छ भन्ने त धेरैलाई थाहा छ तर…
के हामीले खाने नुनमा आयोडिनको मात्रा धेरै भएकै हो ?
२४ जेष्ठ २०७९, मंगलवार २१:२९ मा प्रकाशित
काठमाडौं : पछिल्लो समय नेपालीले खाने नुनमा आयोडिनको मात्र बढी भएको हो कि भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ। पहिले पहिले आयोडिनको कमीले गलगाँडको समस्या धेरै देखिएकाले नुनमा आयोडिन मिसाउन थालिएको भए…
२४ जेष्ठ २०७९, मंगलवार १३:२६ मा प्रकाशित
सुगर भनौं वा मधुमेह, यो रोगलाई अहिले विश्व स्वास्थ्यकै चुनौतीको रूपमा हेरिन्छ । नेपालमा पनि मधुमेह तीव्र रुपमा फैलिरहेको छ । पछिल्लो समय युवाहरूमा पनि मधुमेह देखिन थालेको छ ।…
३० देशमा मंकीपक्सको संक्रमण पुष्टि, जोखिम कति ?
२२ जेष्ठ २०७९, आईतवार २२:२५ मा प्रकाशित
पछिल्लो पटक उत्तर अफ्रिकी मुलुक मोरक्कोले आफ्नो मुलुकमा मङ्कीपक्स भाइरसको संक्रमण फेला परेको पुष्टि गरेको छ । यससँगै मङ्कीपक्स भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएका मुलुकको संख्या ३० नाघेको छ । मोरक्कोसँगै…